Home Wararka (Faallo) Warbixinta Khubarada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
(Faallo) Warbixinta Khubarada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Warbixinta Khubarada QM (S/2019/858) oo horey lagu magacaabi jiray kooxda la socoshada Soomaaliya iyo Eritrea (Somalia Eritrea UN Monitoring Group-SEMG) waxay ka hadleysa arrimo ay ka mid yihiin ficillada ka soo horjeeda nabadda, Ammaanka iyo xasilloonida Soomaaliya, cunaqabateynta hubka, hor istaaga gargaarka bani aadamka, jebinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha, wada shaqeynta dowladaha iyo hay’adaha aan dowladda aheyn, iyo talojeedinno ku saabsan qodobbadas.
Ujeedada warbixinta Khubarada waa hubinta waxyaabaha carqaladaha ku ah dadaalka iyo waxtarka wax qabadka Iskaashiga beesha caalamka iyo Dowladda Federaalka. Xilka khubarada waa toosinta khaladaadka hortaagan ka mira dhalinta dadaalka dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Khubarada waa indhaha iyo dhegaha Golaha Ammaanka ee QM, waxaana Dowladda Federaalka Soomaaliya lagu canaantay inay diiday la shaqeynta Khubarada 2019, taaso lagu tilmaamay inay ka soo horjeedo go’aammada Golaha Ammaanka. Hab dhaqanka DF marna ma taagerin sumcadda iyo karaamada dadka iyo Soomaaliyeed, wuxuuna abuuray aragti ah dal ay ka taliyaan mas’uul aan garan Iskaashiga caalamiga ah si dib loogu dhiso Qaranka Soomaaliyeed.
Waxaan halkaan ku xusaya dhowr arrimood ee warbixinta ku qoran:
1. In xiriirka xumaday ee Dowladda Federaalka (DF) iyo Dowlad Goboledyada (DG) ay khatar halis weyn ku tahay nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya. Xiriirka xumaaday ee DF iyo DG waxaa u sabab ah tallaabooyinka DF ku dooneyso inay ku xoogto natiijooyinka doorashooyinka DG ka dhacay ama ka dhacaya sida Koofu Galbeed (KG), Jubbaland, iyo Puntland. Warbixinta waxay sharraxeysa dhimashada, dhaawaca, xarigga, iyo ku xadgudubyada xuquuqda muwaadiniinta ee ka dhacday Baydhabo bishii Disember 2018. Khubarada waxay heleen caddeymo muujinaya in 82 Xildhiban ee Barlamaanka DGKG la geeyay Muqdisho, lana siiyay $ 5,000 xildhibaan kasta, kaddibna la siiyay lacago u dhexeeya $20,000 iyo 30,000 xildhibaan kasta waqtigii doorashada si ay u dortaan musharraxa Madaxweyne ee DF wadato oo ahaa Cabdiaziz Maxamed Laftagareen. Warbixinta Khubarada waxay caddeyneysaa in Wasiir ka tirsanaa DGDG loo soo xawilay lacag dhan boqolaal kun doolar.
Magaca wasiirka DGKG iyo saraakiisha DF ee lacagta soo diray lama faafin. Warbixinta waxay caddeyneysa in Taliyaha Booliska DGKG G/Sare Mahad Cabdiraxman oo hadda loo magacaabay Taliyaha Ciidanka Asluubta DF oo maalin ka hor maalinta ciidammada booliska DGKG dileen 15 qofood oo ka mid ahaa dad mudaaharaad sameynayay uu ku dhawaaqay in xoog dil ah loo adeegsanayo ciddii mudaaharaad sameysa. Warbixintu waxay faahfaahineysaa arrinta Musharrax Madaxweyne Mukhtar Robow oo maxbuus ah iyo dilka ciidan ilaalinayay.
2. In xiriirka xumaaday ee DF iyo DG uu caqab ku noqday hirgelinta qorshaha dib u habeynta Ciidammada Nabadgelyada Soomaaliya (National Security Reform) iyo qorshaha Ciidammada Soomaaliya xilka nabadgelyada ugala wareegayaan Ciidammada Ajnabiga AMISOM ( Security Transition Plan).
3. In hubin lagu sameeyay diiwaan gelinta ciidammada DF sheegtay inay dhammeystirtay lagu ogaaday in diiwaangelinta qabyo tahay, su’aalo badan ka taagan yihiin, loona baahan yahay dabagal qotodheer. Liiska mushaar bixinta Khubaradu heshay waxaa ku qoran 15,962 ciidan mushaari ah bisha febraayo 2019. Tusaale ahaan, ciidammada ku qornaa qaybta 60, Abril 12, iyo saldhigga Jeneral Gordon ilaa 2018 waxay ahaayeen 678 askari, waxaana la diiwan geliyay 315 askari. Ma cadda halka ay ka baxeen ciidammada gaaraya 363 askari sida fagasho, dhimasho, dhaawac, ruqso, ama inay yihiin askar aan weli la diiwan gelin. Askarta maqan waxaa la siiyay hub iyo qalab ciidan sannadihii la soo dhaafay.
4. In Al Shabab gaareen heer ay ku sameystaan waxyaabaha qarxa, taaso ah inay heleen aqoon iyo qalab ay ku sameystaan waxyaabaha qarxa oo ka duwan kuwii horey loo yaqiin. Sidaa darted, Khubarada waxay soo jeediyeen in la joojiyo soo dejinta qalab loo adeegsan karo qaraxyada isla markaana la ilaaliyo isticmaalka qalabka loo isticmaalo jidadka iyo dekedaha.
5. In Al shabab ku guuleysteen hirgelinta nidaam canshuur ururin ah ee la socda kan DF, taaso macnaheedu yahay in dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan gobolka benaadir bixiyaan 2 canshuur.
6. In guul ka gaaridda dhismaha DG Galmudug ku xiran tahay hirgelinta heshiiska dhexmaray DF iyo ururka ASWJ si loo xoojiyo la dagaalanka Al Shabab.
7. In warbixinta ciidammada iyo maamulka hubka ee 2 mar laha ah ee DF laga rabo sannad kasta ay aheyd qabyo oo macluumaad badan ee laga rabay aysan ku jirin, welina la sugayo dokumenti sharraxaya habka ilaalinta hubka.
8. In DF aysan ku guuleysan maamulka wanaagsan ee hubka, taaso kaliiftay in cunaqabateynta hubka la cusbooneysiiyo sannad kasta.
W/Q. Dr. Maxamud M Culusow